Ungabatsala njani abaThengi kwishishini lenyama?
Ixesha Post: Sep-20-2020
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, ukutya kwenyama kuye kwaba yinxalenye ebalulekileyo yokutya kwabantu. Ukongeza ekuboneleleni ngomzimba womntu ngenqanaba elithile lobushushu, ikwabonelela ngezakha mzimba ezibalulekileyo ekukhuleni komntu kunye nakuphuhliso nasekuzigcineni usempilweni. 1. Functi ...Funda ngokugqithisileyo »
Nakuphi na ukutya okungengokwenzululwazi kunokuqulatha iintsholongwane eziyingozi, iintsholongwane, iiparasites, ityhefu kunye nongcoliseko lweekhemikhali nolomzimba. Xa kuthelekiswa neziqhamo kunye nemifuno, inyama eluhlaza kunokwenzeka ukuba ithwale iiparasites kunye neebhaktiriya, ngakumbi ukuthwala izifo ze-zoonotic kunye ne-parasitic. Ke ngoko, ukongeza kukhetho ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukhuseleko kunye noLwazi lwezeMpilo ukuba uMzi mveliso woKutya kufuneka wazi
Kwishishini lokutya, kubandakanya umzi-mveliso wokutya inyama, umzi-mveliso wobisi, umzi-mveliso weziqhamo kunye neziselo, ukuveliswa kweziqhamo kunye nemifuno, i-pastry, i-brewery kunye nezinye iinkqubo zemveliso yokutya, ukucoca nokucoca izixhobo zokusebenza kunye nemibhobho, izikhongozeli, imigca yokuhlanganisa , sebenzisa ...Funda ngokugqithisileyo »